> Resource > Utility > Sida loo Unformat NTFS Drive
Waxaan kuu soo celin karaa Barzakh formatted NTFS?
Kaliya waxaan formatted xijaab nidaamka file NTFS. Ma aanan ka dhigan tahay inay u sameeyaan. Laakiinse haatan files aan ku hadlo xijaab in ay yihiin oo dhan laga badiyay, maxaa yeelay, waxaan si taxaddar la'aan ahaa in la sameeyo gurmad ah. Waxaan u baahan tahay caawimaad si unformat aan xijaab NTFS. Cidna ma ogaan sida loo sameeyo? Mahad badan.
Maalmahan, drives iyo maqaal qoruhu ugu kombiyuuterada Windows waa xijaab NTFS. Si ula kac ah ama si kama formatting ee drive aad NTFS u tirtiri doonaa dhammaan faylasha waxay ku. Laakiin runta waa in aad karaa NTFS weli unformat la wado, taas oo macnaheedu yahay in aad soo kaban karto dhammaan faylasha lumay dib uga hadlo xijaab in unformatted. Xogta formatted lagu lumin doonaa weligiis kaliya marka xogta cusub ku hadlo xijaab u overwrites. Taasi waa, waad joojin kartaa gelinaya macluumaadka cusub si aad drive NTFS formatted iyo raadiyo barnaamij formatted NTFS kabashada xogta xijaab ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Utility Tani cajiib ah gelineya inaad unformat drive NTFS sida aan caadi ahayn u fudud, iyo sidoo kale xal khatar la'aan. Files Ku dhowaad dhammaan formatted, sida sawiro, files audio, document files, videos, iwm, si fudud loo soo celin karin ka hadlo xijaab NTFS aad la.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah si loo soo celiyo NTFS formatted hadda la wado.
Unformat NTFS Drive in 3 Talaabooyinka
Wax First hore, fadlan ha soo dajiyo Wondershare Data Recovery aad formatted xijaab NTFS.
Tallaabada 1 Dooro "Recovery ah Barzakh," mode si loo soo celiyo formatted xijaab NTFS
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery barnaamijka on your computer, waxaad heli doontaa 3 hababka soo kabashada ee suuqa kala barnaamijka.
Halkan, si unformat xijaab NTFS, aynu dooran "Recovery ah Barzakh," hab ah in lagu bilaabo.
Tallaabada 2 baarista formatted xijaab NTFS
Hadda barnaamijka muujin doonaa oo dhan drives jirka on your computer. Fadlan dooro mid aad rabto in aad soo celin formatted xijaab NTFS ka oo guji "Next" in ay sii wadaan.
Halkan waxa aad u baahan tahay in ay doortaan aad formatted xijaab NTFS oo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad unformat ah NTFS drive dibadda adag, fadlan hubi in uu waxaa laga garan karaa your computer sameeyo.
Tallaabada 3 Unformat NTFS drive
Marka scan ka baxayo, dhammaan faylasha recoverable aad formatted xijaab NTFS lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya si ay u xusaan faylasha aad doonaysid in aad unformat oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii files si aad formatted xijaab NTFS si looga fogaado xogta overwritten.
iPhone anteeno dhibaatooyinka iyo Xalka aad ka ogaato
Waa maxay Celebrity Photo daadin Na bar karaa About Data Management iyo Ammaanka
Sida loo beddel File System aan formatting